IDuteronomi 31 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Waya uMoses, wawathetha la mazwi kumaSirayeli onke,
2 wathi kuwo, Ndiminyaka ilikhulu elinamanci mabini namhla ndizelwe. Andisenako ukuphuma nokungena; noYehova utheuthe kum, Akusayi kuyiwela le Yordan.
3 NguYehovaNguYehova uThixouThixo wakho owela phambi kwakho; wozitshabalalisa ezo ntlanga phambi kwakho, uzithimbe. NguYoshuwa owela phambi kwakho, njengoko wathethayo uYehova.
4 Uya kwenza uYehova kuzo njengoko wenzayo kuSihon nakuOgi, ookumkaniookumkani bama-Amori, nakwilizwe labo, awabatshabalalisayo;
5 azinikele kuni uYehova; nenze kuzo ngokomthetho wonke endiniwiseleyo.
6 Yomelelani nikhaliphe: musani ukoyika, musani ukungcangcazela ebusweni bazo. Ngokuba nguYehovanguYehova uThixouThixo wakho ohamba nawe; akayi kukuyekela, akayi kukushiya.
7 UMoses wambiza ke uYoshuwa, wathi kuye emehlweni amaSirayeli onke, Yomelela ukhaliphe; kuba wena uya kungena naba bantu kwelo zwe wafungayo kooyise uYehova ukuba wobanika; wena uya kubadlisa ilifa.
8 NguYehovaNguYehova ohamba phambi kwakho; yena uya kuba nawe; akayi kukuyekela, akayi kukushiya. Uze ungoyiki, ungaqhiphuki mbilini.
9 Wawubhala uMoses lo myalelo, wawunika ababingeleliababingeleli, oonyanaoonyana bakaLevi, ababethwala ityeya yomnqophiso kaYehova, namadoda amakhulu akwaSirayeli onke.
10 UMoses wabawisela umthethoumthetho, esithi, Ekupheleni kweminyaka esixhenxe, ngexesha elimisiweyo lomnyaka woyekelelo, emthendelekweni weminquba,
11 ekuzeni kubonakala kwamaSirayeli onke phambi koYehova uThixouThixo wakho, kuloo ndawo aya kuyinyula, wowulesa lo myalelo phambi kwamaSirayeli onke ezindlebeni zawo.
12 Bobizelwa ndawonye abantu, amadoda, nabafazi, nabantwana, nomphambukeli wakho osemasangweni akho, ukuze beve, nokuze bafunde, bamoyike uYehova uThixouThixo wenu, bagcine ukuwenza onke amazwi alo myalelo;
13 beve noonyana babo abangaziyo, bafunde ukumoyika uYehova uThixouThixo wenu, yonke imihla enidla ubomiubomi ngayo, kuloo mhlaba eniwela iYordan nisiya kuwuma.
14 Wathi uYehova kuMoses, Yabona, isondele imihla yakho yokuba ufe. Biza uYoshuwa, niye nime ententeni yokuhlangana, ndimyale. Baya ooMoses noYoshuwa, bema ententeni yokuhlangana.
15 Wabonakala uYehova ententeni emqulwini welifu. Wamana umi umqulu welifu phezu komnyango wentente.
16 Wathi uYehova kuMoses, Yabona, uya kulala nooyihlo; basuke aba bantu bahenyuze ngokulandela thixo bambi belo zwe bangena kulo phakathi kwalo, bandishiye, bawaphule umnqophiso wam endiwenze nabo;
17 uvuthe umsindoumsindo wam kubo ngaloo mini, ndibashiye, ndibusithelise ubusoubuso bam kubo, babe ngabokudliwa kuthi tu, bafunyanwe bububi obuninzi naziimbandezelo; bathi ngaloo mini, Akungenxa yokuba engekho na uThixouThixo wam phakathi kwam, le nto ndifunyenwe bobu bubi?
18 Ke mna ndiya kubusithelisa kuphele ubusoubuso bam ngaloo mini, ngenxa yobubi bonke ababenzileyo; ngokuba bejike baya thixweni bambi.
19 Kaloku ke zibhaleleni le ngoma, niyifundise oonyanaoonyana bakaSirayeli, niyibeke emlonyeni wabo, ukuze le ngoma ibe lingqina lam koonyana bakaSirayeli.
20 Kuba ndiya kubangenisa kuwo umhlaba endafunga kooyise ngawo, obaleka amasi nobusi, badle bahluthe, batyebe; bajike baye thixweni bambi, babakhonze, bandigibe, bawaphule umnqophiso wam.
21 Kothi, xa bathe bafunyanwa bububi obuninzi naziimbandezelo, isuke le ngoma iphendule phambi kwabo, ibe lingqina: kuba ayisayi kulityalwa imke emlonyeni wembewu yabo; kuba ndiyakwazi ukucamanga kwabo abakwenzayo namhla, ndingekabangenisi njekwelo zwe ndifunge ngalo.
22 Wayibhala uMoses loo ngoma ngaloo mini, wayifundisa oonyanaoonyana bakaSirayeli.
23 Wammisela uYoshuwa unyanaunyana kaNun umthethoumthetho; wathi, Yomelela, ukhaliphe, kuba uya kubangenisa wena oonyanaoonyana bakaSirayeli kwelo zwe ndabafungela lona. Ndiya kuba nawe mna.
24 Kwathi, akugqiba uMoses ukuwabhala amazwi alo myalelo encwadini ada agqitywa,
25 uMoses wabawisela umthethoumthetho abaLevi, ababethwala ityeya yomnqophiso kaYehova, esithi,
26 Yithabatheni incwadiincwadi yalo myalelo, niyibeke ecaleni letyeya yomnqophiso kaYehova uThixouThixo wenu, ibe lingqina khona kuni.
27 Ngokuba ndiyazazi iinkani zakho, nentamo yakho elukhuni. Yabonani, ndisadla ubomiubomi nje, ndisenani, namana niphikisana noYehova; kobeka phi na emvaemva kokufa kwam?
28 Bizelani ndawonye onke amadoda amakhulu ezizwe zenu, nababhali benu, beze kum, ndiwathethe la mazwi ezindlebeni zabo, ndingqinisise amazuluamazulu nehlabathi ngabo.
29 Kuba ndiyazi ukuba, emvaemva kokufa kwam, niya kuzonakalisa kanye, nityeke endleleni endiniwisele umthethoumthetho ngayo, nihlelwe bububi ekupheleni kwemihla; ngokuba niya kwenza ububiububi phambi koYehova, ukuba nimqumbise ngomsebenzi wezandla zenu.
30 Wawathetha ke uMoses ezindlebeni zebandla lonke lakwaSirayeli amazwi ale ngoma, ada agqitywa: